May 9, 2020 - Lupyo News
မငြးရာဇာကှောငြ့ အိမဖြောမြလေးရဲ့ အမကေ အမှုကိဈစတှကှေောငြ့ သတသြခငွေနြလေောကအြောငြ စိတဓြါတကြနွတောတဲ့
May 9, 2020 by Lupyo News
မင်းရာဇာကြောင့် အိမ်ဖော်မလေးရဲ့ အမေက အမှုကိစ္စတွေကြောင့် သတ်သေချင်နေလောက်အောင် စိတ်ဓါတ်ကျနေတာတဲ့ မင်းရာဇာ၏ အိမ်ဖော်မလေး (Grace) ရဲ့ အမေက အမှုကိစ္စတွေကြောင့် သတ်သေချင်နေတယ်ဆိုလို့ နှစ်သိမ့်ပေးနေရတဲ့ အမျိုးသမီးရေးတတ်ကြွလှုပ်ရှားသူ ဒေါ်နေအုန်းလှစိတ်ဓါတ်ကျနေတာပြီး အမေကလည်း ဆွဲကြိုးချသတ်သေချင်ကြောင်း မင်းရာဇာ၏ အိမ်ဖော်မလေး (Grace) အမေကို နှစ်သိမ့်ပေးနေရတယ်ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးရေးတတ်ကြွလှုပ်ရှားသူ ဒေါ်နော်အုန်းလှ ဒေါ်နော်အုန်းလှသည် အမျိုးသမီးရေးတတ်ကြွလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ပြီး ယခုအခါ မင်းရာဇာ၏ အိမ်ဖော်မလေး (Grace) ဘက်မှနေပြီး အစစအရာရာ ကူညီပေးနေသူ တစ်ဉီးဖြစ်သည်။ မေလ ၈ရက်နေ့ မနက်တွင် မြောက်ဉက္ကလာဆေးရုံမှာ တွေ့ရှိခဲ့ပြီး အစစအရာရာ ကူညီပေးခဲ့ကြောင်း Grace ၏ အမေကိုလည်း နှစ်သိမ့်ပေးနေရကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဒီအမှုမှာ အမျိုးသားတင်မက အမျိုးသမီးအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပြီး သူတို့ဟာ နယ်ကဖြစ်ပြီး သူတို့အတွက် ပါဝင်ပေးမယ့်မရှိတာမို့ ပါဝင်ကူညီကြောင်း … Read more
စုံတှဲတှအေနနေဲ့ နစေ့ဉျ ဆှေးနှေးသငျ့တဲ့ အဓိကအကွောငျးအရာ (၆)ခု
စုံတွဲတွေအနေနဲ့ နေ့စဉ် ဆွေးနွေးသင့်တဲ့ အဓိကအကြောင်းအရာ (၆)ခု အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူ နေ့တိုင်းအာလာပသလ္လာပစကား ပြောဆိုခြင်းဟာ အမြဲတမ်းအလေ့အကျင့် ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အချို့လူတွေက ရိုမန့်တစ်ဆန်တဲ့ စကားလုံးတွေ၊ ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုသာ အတူတူပြောဆိုသင့်တယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ သို့သော် အမှန်တရားကနေ ဝေးဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ကျန်းမာသောအချစ်ရေးဟာ ကောင်းမွန်သော ပြောဆိုဆက်ဆံမှုနှင့် ရိုးသားမှုအပေါ် အခြေခံပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ စုံတွဲတွေ နေ့စဉ်ဆွေးနွေးသင့်တဲ့ အဓိကအကြောင်းအရာ (၆)ခုကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ စုံတွဲတွေ ဆွေးနွေးသင့်တဲ့အဓိကအကြောင်းအရာများ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ပြီး သင့်လက်တွဲဖော်နဲ့ ရေရှည်မြဲတဲ့ နှောင်ကြိုးကို တည်ဆောက်လိုပါက သင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝရှု့ထောင့်တွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်လက်တွဲဖော်နဲ့ နေ့စဉ်ဘာတွေတိုင်ပင်သင့်သလဲ? ADVERTISEMENT ၁။ အနာဂတ် သင်တို့အချစ်ရေးကို ရေရှည်တည်မြဲလိုရင် လက်တွဲဖော်နဲ့ နေ့စဉ်ဆွေးနွေးသင့်တဲ့ ပထမဆုံးအချက်က အနာဂတ်အတွက် မျှော်လင့်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ … Read more
သိပ်နောက်မကျသေးခင် ကိုယ့်ချစ်သူကို မဖြစ်မနေ မေးရမယ့် မေးခွန်း ၆ ခု
သိပ်နောက်မကျသေးခင် ကိုယ့်ချစ်သူကို မဖြစ်မနေ မေးရမယ့် မေးခွန်း ၆ ခု သင့်မှာ သိပ်ချစ်ရတဲ့ချစ်သူရှိနေပြီလား? ဒါမှမဟုတ် ရွေးချယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားသူရှိနေပြီလား? အဲ့ဒီယောကျာ်း ဒါမှမဟုတ် မိန်းမကို တချိန်ချိန်မှာ လက်ထပ်ဖို့သင်စဉ်းစားထားပြီလား? ဒီလိုဆုံးဖြတ်ထားပြီဆိုရင် သင်ရည်ရွယ်ထားသူရဲ့အကြောင်းကို အားလုံးသိဖို့တော့လိုမယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကသင့်ကို သူတို့ဘဝရဲ့အရာအားလုံးကိုထုတ်ပြလိမ့်မယ် မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ရေ ရှည်တွဲလာပြီးမှ မကွဲရအောင် ဒီမေးခွန်းလေးတွေကို မဖြစ်မနေ မေးသင့်ပါတယ်။ ငါတို့လက်ထပ်ပီးရင်ပြောင်းလဲသွားမလား? … အသုံးအများဆုံးအဖြေကတော့”Yes”ပြောင်းလဲသွားမယ်ပေါ့။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုနဲ့အတူ သင်နဲ့သင့်ချစ်သူက ပြောင်းလဲလိမ့်မယ်ပေါ့။ ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းက လက်ထပ်ပြီးနောက်မှာ သင်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမှာလဲ။ လေ့လာမှုတွေအရ လက်ထပ်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာ လူမှုစီးပွားရေး အိမ်မှုကိစ္စနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကစလို့ အဓိကစရိုက်တွေပြောင်းလဲသွားတတ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက သင်မျှော်မှန်းထားခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်တော့မှာပါ။ သင်မကြိုက်တော့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ ပြောင်းလဲမှုက အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့အတွက် အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုမှာ သင်နဲ့သင့်ရဲ့ချစ်သူတို့က ညီတူမျှတူနားလည်နဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာမလျော့တဲ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုမျိုးနဲ့ပြောင်းလဲဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။ ဒီပြောင်းလဲမှုဆိုတာနဲ့ပက်သက်ပြီး … Read more
သနားစရာ အရမျးကောငျးတယျဗြာ #နတေို့ငျးလိုလို တှတေ့ယျ 62လမျး စကျမှုသှားတဲ့လမျးမှာ
သနားစရာ အရမျးကောငျးတယျဗြာ #နတေို့ငျးလိုလို တှတေ့ယျ 62လမျး စကျမှုသှားတဲ့လမျးမှာ သနားစရာ အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ #နေ့တိုင်းလိုလို တွေ့တယ် 62လမ်း စက်မှုသွားတဲ့လမ်းမှာ ကလေးက 3နှစ်လောက်ဘဲရှိသေးတာ သူ့အဖေသွားတဲ့ နောက်ကို ခွက်ကလေးကိုင်ပီလိုက်နေတာ တွေ့မိတိုင်း အရမ်းဝမ်းနည်းမိတယ်ဗျာ ကျနော်နေ့တိုင်း အဲ့ရောက်တယ် ရောက်တိုင်း 1000 အမြဲလှူဖြစ်ပါတယ် တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်း ကျနော် သနားလို့ ပုံမှန် 1000တော့လှူဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဘက်ရောက်လို့ တွေ့ ခဲ့ရင် လှူခဲ့ လိုက်ပါအုံး တခါတလေ တွတ်ပီ ကွေ့နားတွေ့တယ် စက်မှုမှာ ဒီနေ့တွေ့တာ ဘယ်မာနေလဲတော့ မသိဘူး နောက်နေ့ကျမှ တွေ့ရင် ကလေးကို လက်ဆောင် ဝယ်ပေးအုံးမယ် credit Saw Myo Thant Kyaw တကယ်လို့များ ဒီသားအဖနဲ့ လမ်းမှာတွေ့ ရှောင်မသွားကြပါနဲ့နော် … Read more
ဒီလက္ခဏာတွေကို ဖတ်ပြီး မိမိအိမ်ထောင်ရေး အကြောင်း ကြိုတင်ဟောကိန်း ထုတ်နိုင်…
ဒီလက္ခဏာတွေကို ဖတ်ပြီး မိမိအိမ်ထောင်ရေး အကြောင်း ကြိုတင်ဟောကိန်း ထုတ်နိုင်… လက္ခဏာဖတ်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ကောက် ဟောကိန်းထုတ်ခြင်းကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကျင့်သုံးကြပြီး အိန္ဒိယ နက္ခတ်တဗေဒင် ပညာရပ်မှ စတင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မှာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အရည်အချင်းကို စစ်ဆေးဖို့ သို့မဟုတ် လက္ခဏာကို လေ့လာပြီး နိမိတ်ဖတ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အိမ်ထောင်ရေးလမ်းကြောင်း ကိုယ့်ဘာသာ အဓိပ္ပါယ်ကောက် နိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်တာက လက်နှစ်ခုကို ပူးထားပြီး အဲဒီမှာ ပေါ်တဲ့ အရစ်အကြောင်းတွေ အာရုံစူးစိုက် ကြည့်ရုံလေးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလမ်းကြောင်းများရဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ်တွေမှာ လမ်းကြောင်းတွေ အနိမ့်မြင့်တူနေရင် သို့မဟုတ် ဆုံနေ လို့ရှိရင် သင်ဟာ နူးညံ့ကြင်နာသူ၊ ဆတ်ဆတ်ထိမခံသူ နဲ့ တည်ငြိမ်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ … Read more
(၇)တန်း ကျောင်းသူလေးအား သားမယားပြုကျင့်ရန်ကြံစည်ခံရမှု….
(၇)တန်း ကျောင်းသူလေးအား သားမယားပြုကျင့်ရန်ကြံစည်ခံရမှု….(ရုပ်သံ) (၇)တန်း ကျောင်းသူလေးအား သားမယားပြုကျင့်ရန်ကြံစည်ခံရမှု…. ၁၄နှစ်အရွယ်(၇)တန်းကျောင်းသူလေး သားမယားပြုကျင့်ရန်ကြံစည်ခံရမှု တရားဥပဒေစိုးမိုးစေရန်နဲ့ တရားရုံးစောင့်ကြည့်ဖို့ ဝန်းရံ ၁၄ နှစ်အရွယ် ၇ တန်း ကျောင်းသူလေးကို တစ်ရွာထဲနေသူ အမျိုးသားတစ်ဦးမှ သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ရန် ကြံစည်ခံခဲ့ရတဲ့အပေါ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြင်ဦးလွင်မြို့ ကလေးသူငယ်နဲ့ အမျိုးသမီးအကြမ်းဖက်ခံရမှု တားဆီးကာကွယ် ပပျောက်ရေးကွန်ယက် နှင့် မန္တလေး ပညာရေးကောလိပ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ ကိုယ်စားပြုကော်မတီတို့မှ ကာယကံရှင် မိန်းကလေး နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများထံသို့ သွားရောက် စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများပြုလုပ်ပြီး အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ တရားရုံးစောင့်ကြည့်ဖို့ ဝန်းရံခဲ့ကြပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်မှာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊ ရဲဘော်ကြီး ကျေးရွာနေ ဦးဟိန်းမင်းဇာမှ တစ်ရွာတည်းနေ ၁၄ နှစ်အရွယ် ၇ တန်း ကျောင်းသူ (မ. ..)ကို … Read more
ရာသီလာစဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်းက ဘေးကင်းလုံခြုံမှု ရှိပါ့မလား
ရာသီလာစဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်းက ဘေးကင်းလုံခြုံမှု ရှိပါ့မလား အမျိုးသမီး တယောက်အနေနဲ့ ရာသီလာချိန်ဖြစ်နေတာ တခုတည်းအတွက်နဲ့ တော့ လိင်ဆက်ဆံမှုကို ရှောင်ရှားစရာ မလို ဘူးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ တချို့ အမျိုးသမီးတွေ အတွက်ဆိုရင် ရာသီလာချိန်မှာ လိင်မှုကိစ္စပြုလုပ်ရတာက တခြားအချိန်တွေ ထက်တောင် ပို ပြီး သာယာကျေနပ်စရာ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီလို လုပ်တာကို တချို့ကလည်း မီးနီဖြတ်မောင်းတယ်လို့ တင်စားပြော တတ်ကြပါတယ်။ ရာသီလာချိန်မှာ ချောဆီလိုအပ်ချက်လည်း နည်းပါတယ်။ လေ့လာမှု အချို့အရ မီးနီဖြတ်မောင်းခြင်းက ဗိုက်အောင့်ခြင်း အပါ အဝင် အမျိုးသမီးတွေ ရာသီလာချိန်မှာ ခံစားရလေ့ရလေ့ရှိတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုလည်း သက်သာစေတယ်လို့ သိရပါ တယ်။ International Headache Society က ထုတ်ဝေတဲ့ Cephalalgia ဂျာနယ်က ၂၀၁၃ … Read more
ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးနှင့် ဆက်နွယ်နေပြီး ကျောက်ရုပ်ဖြစ်သွားသည့် (မောင်ကံ)သမိုင်းကြောင်း
ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးနှင့် ဆက်နွယ်နေပြီး ကျောက်ရုပ်ဖြစ်သွားသည့် (မောင်ကံ)သမိုင်းကြောင်း တစ်ခါက ဒဂုံမြို့တွင် ရိုးသားစွာ လယ်ယာလုပ်ကိုင်သော မောင်ကံအမည်ရှိ လူငယ်တစ်ဦး ရှိလေ၏။ လွန်စွာသန်မာထွားကျိုင်းသည် ဆို၏။ တစ်နေ့တွင် ရသေ့တစ်ပါးက (မူကွဲများတွင် ဇော်ဂျီဟုလည်းဆို) မိမိ၏ ထွက်ရပ်လမ်းအတွက် လိုအပ်သော ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ရှာရာ မောင်ကံအား တွေ့သဖြင့် မိမိအား ကူညီပါမည်လားမေးမြန်းရာ မောင်ကံလည်း ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ လက်ခံလေ၏။ သို့ရာတွင် ရသေ့က မောင်ကံ၏ သတ္တိကိုစမ်းလိုသဖြင့် ငါခုန်သလို လိုက်ခုန်စမ်းပါလှည့် ဟုဆိုကာ ကန်တစ်ခုအားခုန်ကျော်ပြလေ၏။ ကန်မှာအတော်ကျယ်သော်လည်း ရသေ့မှာ ချောမောစွာပင် တစ်ဖက်ကမ်းသို့ ရောက်လေ၏။ မောင်ကံလည်း မာန်ကိုသွင်း၍ ခုန်သော်လည်း ရသေ့က တန်ခိုးပြသောကြောင့် ကမ်းပေါ်မရောက်ဘဲ ဘောင်ပေါ်ကျကာ ကန်ပဲ့သွားလေ၏။ ( ထိုအရပ်ကို ယနေ့တိုင် ကံဘဲ့ဟု ခေါ်လေသည်။) … Read more
“ ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ‌ဟောခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယ လူငယ်ဗေဒင်ဆရာ နောက်ထပ် ‌ဟောကိန်းတစ်ခုထပ်ထုတ် ”
အပိုးမကျိုးသေးတဲ့ ဒေဗစ်လားကို စိန်ခေါ်လိုက်သော ကျူရှင်ဆရာ….(ရုပ်သံ)
အပိုးမကျိုးသေးတဲ့ ဒေဗစ်လားကို စိန်ခေါ်လိုက်သော ကျူရှင်ဆရာ….(ရုပ်သံ) အပိုးမကျိုးသေးတဲ့ ဒေဗစ်လားကို စိန်ခေါ်လိုက်သော ကျူရှင်ဆရာ။ စကားစစ်ထိုးစိန်ခေါ်လိုက်ပီဗျာ ဒေဗစ်လားမီးမွေးခဲ့တဲ့အတွက် ကိုရိုနာရောဂါသည်ဟာဆိုရင် တစ်ရာကျော်သွားခဲ့ပီဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဟောပြောချက်များဟာဆိုရင် အလွန်အကျွံအိုဗာများဖြစ်နေပီး သူ့ကြောင့်ပင် ခရစ်ယာန်ဘာသာအပေါ် အထင်အမြင်သေးစရာ ဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ် အခုလည်းပဲ သူရဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့် ကိုရိုနာခံစားနေရသူများကိုပင် အားမနာ၊ အခုလိုကျန်းမာလာအောင် ကုသပေးလိုက်တဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနဲ့ မြန်မာ့အစိုးရကိုမှ အားမနာ လူရွံအောင် လုပ်ပြနေတာဟာ အတော်လေးကို အရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်စေပီး ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုပါ သွယ်ဝိုက်မုန်းတီးစေပါတော့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးတယ် နိုင်ငံခြားသားခံယူတယ်၊ မြန်မာပြည်လာတယ် မြန်မာလူမျိုးတွေကို ဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်တယ်၊ သင့်မြတ်နေတဲ့ ဘာသာတရားတွေကို မီးမွှေးပေးတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံက ပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေတွေကို ချိုးဖောက်ပီး တရားပွဲလုပ်ခဲ့လို့ ရောဂါတွေပြန့်ပွားခဲ့တယ်၊ သူကိုယ်တိုင်ကိုရိုနာကူးစက်လို့ ပြည်သူတွေရဲ့ အခွန်ငွေတေနဲ့ အခမဲ့ဆေးကုပေးရတယ်၊ သူနာပြုတွေ ဆရာဝန်တွေ ကိုမှ အားမနာ … Read more